Meelaha Yaryar ee loogu Noolaado Weyn ee Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Meelaha Yaryar ee Nolosha Weyn ee Dutchtown
Waxaa jira hal eray oo had iyo jeer maskaxda ku soo dhaca marka laga hadlayo saamiyada guryeynta taariikhiga ah ee Dutchtown: kala duwan. Dutchtown waxay qof walba u haysaa wax - guryo laba dabaq ah oo waasac ah, tiro badan oo bungalows ah oo waaweyn iyo kuwo yaryar, aqallada qoryaha darandooriga u dhaca, laba iyo afar guryo qoys, iyo wax kasta oo u dhexeeya.
Maanta, waxaan eegi doonnaa qaar ka mid ah guryaha aadka loo cabbiray ee hadda ku jira suuqa Dutchtown. Haddii aad raadinayso guri bilaw ah, waxaad raadineysaa inaad cabirto midig, ama waxaad doorbideysaa xaddidaadyo qallafsan, Dutchtown waxay leedahay wax badan oo ay ku bixiso baakado yar.
Labadan qol jiif, hal bungalow oo qubeys ah ayaa culeyskiisu yahay qiyaastii 800 cagood oo laba jibbaaran. Darbiyada lebiska ee banaanka ah waxay guriga keenaan dareenka rustic, magaalo ahaan ee gurigan 112 jirka ah ee ku yaal dhammaadka koonfureed ee xaafadda Dutchtown.
$ 92,500 · Ka eeg Zillow
Si ku habboon oo u dhow Chippewa iyo South Grand, saqafka mansard-ka labaad ee boqortooyada 3425 ee Keokuk ayaa ka dhex muuqda dadkii ku jiray dhismahan. Iyada oo lagu soo bandhigay laba qol jiif iyo badh buuxa iyo badh, guriga ayaa dhowaan dib loo habeeyay wuxuuna ka kooban yahay qalab bir ah oo aan birta lahayn, armaajooyin 42-inji ah, iyo miisaska miisaska.
$ 125,000 · Ka eeg Zillow
Haddii aad rabto guri yar oo leh deyr weyn, 3425 Montana waa adiga. Qiyaastii 700 cagood oo laba jibbaaran, aqalkan 1890 wali waa waasac, wuxuuna bixiyaa saddex qol, hal qubays, iyo jikada wax lagu cuno. Dhulka labanlaaban ee la ooday ayaa ka tagaya boos badan beerta, madadaalada, ama u oggolaanshaha dhallaankaagu inay duurjoogta noqdaan. Oo hadday taasi kugu filnayn meel cagaaran, Beerta Marquette wuxuu ku yaal dhawr albaab oo wadada dhinaceeda ah.
$ 120,000 · Ka eeg Zillow
Waxa kale oo ku yaal meel u jirta marquette Park Marquette, sedexdan qol/hal qubays oo ku yaal Pennsylvania Avenue waxay ka kooban tahay jikada cusub ee cajiibka ah oo leh dhagaxa dhagaxa ah, qalabka biraha aan birta lahayn, iyo dhabarka dambe ee dhulka hoostiisa. Waxa kale oo aad ka heli doontaa gidaarrada lebenka ah ee daboolka ka kacay, meel dabka lagu qurxiyo, iyo astaamo kale oo qaab -dhismeed oo u gaar ah gudaha gurigan haddii kale aan isla weynayn.
$ 100,000 · Ka eeg Zillow
Ma waxaad raadinaysaa inaad gacmaha kor u duubto oo aad ka dhigto gurigaaga yar mid kuu gaar ah? Labadan qol jiif, hal qubeys, 900 cagood oo laba jibbaaran oo ku yaal Mount Pleasant waa qiimo jaban, diyaar u ah soo-galid, oo sugaya taabashadaada dhammaynta. Waxaad ka ag dhowaan doontaa geeska Suts's Donuts, waxaadna ka bixi kartaa john dheer subax adiga oo socod ku maraya agagaarka Mount Pleasant Park.
$ 70,000 · Ka eeg Zillow
Liiska qiimayntu waa sax marka la daabaco. Sharaxaaduhu waxay ku salaysan yihiin xaqiiqooyin iyo tirooyin ay bixiyeen wakiillada liisku iyagoo adeegsanaya Zillow. Liisaska kor ku xusan waxaa loo bixiyey ujeeddooyin macluumaad oo keliya. Annaga oo ah DutchtownSTL.org ma nihin xirfadlayaal hanti ma guurto ah - hubi inaad la xiriirto wakiil si aad u hesho faahfaahinta buuxda ee liisaskan.
Filimka hoos Estate Real. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown iyo Estate Real. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay August 18th, 2021 .
DutchtownSTL.org Estate Real Meelaha Yaryar ee Nolosha Weyn ee Dutchtown